Museum of Natural History of Slovenia, Prirodoslovni muzej Slovenije - Ljubljana
Adreesị: Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenia;
Ekwentị: +386 1 241 09 40;
Oge ọrụ: kwa ụbọchị site na 10:00 ruo 18:00.
Ihe ngosi nka nke Slovenian nke ihe ndi ozo di iche iche nwere otutu ihe ndi ozo dika National Museum of Slovenia . Ha dị n'otu ụlọ ahụ. Akụkụ nke ihe ngosi nke Natural History Museum wepụtara site na National Museum. A na-enye ndị ọbịa ọhụụ dị iche iche na-egosi mgbanwe n'ọmụmụ sayensị na usoro ndu.
Kedu ihe na-adọrọ mmasị banyere ụlọ ngosi ihe nka?
N'ime ụlọ nke oge a, nke wii wii Wilhelm Resorie wuru na ya na Wilhelm Treo nke Ljubljana , ụlọ ọrụ ihe ngosi ahụ dị kemgbe 1885. O nwere ọtụtụ nnakọta na ihe ngosi ndị na-adọrọ mmasị, nke ị nwere ike depụta ihe ndị a:
Ihe nnọchianya nke ihe ngosi ihe omumu nke ihe omumu bu ihe omuma nke a na-azoputa, nke di na 1938 nso Kamnik.
N'afọ 2005, n'etiti ihe ngosi ahụ, ọkpụkpụ ọzọ - nwa nwanyị na-eto eto (whale). A chọtara ya n'afọ 2003 na ụsọ oké osimiri Slovenia. Ihe ngosi ahụ aghọwo akụkụ nke ngosi ahụ kemgbe mgbụsị akwụkwọ 2011.
Ihe ngosi ihe omuma nke Slovenia na-adọta ndi mmadu nleta anya site n'inwe otutu ihe omuma. A na-anakọta ha site n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ, n'etiti ihe ngosi bụ skelet nke whale mustachioed.
Otu n'ime mkpokọta dị mkpa nke ihe ngosi nka bụ ịnweta, bụ nke Sigmund Zois, bụ onye na-akọ akụkọ ihe mere eme, malitere ịnakọta. N'etiti ihe ngosi ndị ahụ, enwere ịnweta aha ịnweta nsọpụrụ. N'ebe a, ị pụkwara ịhụ shells of mollusks.
A na-akwụ ọtụtụ nnụnụ anya maka nnụnụ, anụ ugbo na anụ mammal na-ebi na Slovenia.
A na-emeghe Museum of Natural History na Slovenian site na elekere 10:00 ruo 18:00 site na Monday gaa na Sunday, ma na Thursday, ụlọ ọrụ ahụ ga-ekpuchi n'elekere 20:00. Ụbọchị na-adịghị arụ ọrụ bụ ụbọchị ezumike ọha na eze. Ụlọ ihe ngosi nka na-enwe nzukọ ọmụmụ ihe maka ụmụ, n'oge a na-eme ka ụmụaka mara gburugburu ebe obibi.
E nwere ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ihe ncheta mbụ maka ndị enyi. Mee foto ma ọ bụ vidiyo na-enweghị ikike nke isi nke ihe ngosi nka agaghị ekwe omume. Ebe ọ bụ na ụlọ ihe ngosi ihe nwere ọtụtụ ọnụ ụzọ, onye ọ bụla n'ime ha na-eme atụmatụ maka mkpa nke ụfọdụ ndị mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, maka ndị ọrụ ịnya oche oche, e nwere ọnụ ụzọ site na Prešerenova Street.
A pụrụ inweta ụlọ ngosi ihe nka site n'ịgbaso ntụrụndụ ndị dị ka Tivoli Park , Ụlọ Nzuko omeiwu na Opera House. Site na etiti gaa na ihe ngosi nka nwere ike ruru na ụkwụ, ebe ọzọ ha nwere ike iru site na bọs 18.
Guzoro maka ọrụ ọrụ
Nri site Narcisso Rodriguez
Visa ka Belize
Pallets n'ime ime
Kylie Jenner gosipụtara ọkpụkpụ warara ọnwa abụọ mgbe ọ mụsịrị nwa
Ultrasound na izu 7 nke ime
Mmekọrịta a na-emebi
Uwe eji aka uwe 3/4
Kedu ihe ụmụ anyị na ndị nne mba ọzọ na-azụ ụmụ ha maka nri ụtụtụ?
Movie film nke Woody Allen na-emeghe ememme ngosi nke Cannes na 69th
PuiPui - kacha mma oke bekee na Ụwa!
Achịcha maka tii
Mgbe ọ bụ nwata, Bradley Cooper dere otu akwụkwọ maka Philadelphia Daily News banyere otu akwụkwọ na ezigbo enyi
Igbe na hip
Mmebe oge mmere - olee otu esi eme ihe ziri ezi maka ndị nne na nna nke afọ iri na ụma?
Mmiri na-eku ume n'oge ọrụ
Top nke chiffon